Archive du 20170831
Fipoahana teny Ambohimanambola Politika avo lenta ?
Nisehoana fipoahana narahina afo goavana ny toby famokarana herinaratra an’ny orinasa AKSAF Power, mamokatra 50Mgw,
Andry Rajoelina Manomana bala hitifirana
Misoko miadana sy manomboka mifoha amin’ny torimasony ny vondrona politika MAPAR manetsika ireo mpanohana azy isan-tsokajiny na eto an-drenivohitra na any amin’ny faritra.
Fanjakana HVM Manomboka mitsipaka an’i Frantsa ?
Iray andro taorian’ny nandraisan’ny minisitry ny raharaham-bahiny Henry Rabary-Njaka feno ny fahefana maha minisitra azy, dia masoivoho miisa 3 no tonga nitsidika azy teny amin’ny trano fiasany teny Anosy omaly.
CFM Diso hatrany amin’ny lalàna fananganana
Samy miandry ny asa hotontosain’ny CFM (Conseil pour le Fampihavanana Malagasy) avokoa ny olom-pirenena Malagasy ankehitriny taorian’ny fanendrena ireo mpikambana 33 ao anatiny.
Fampielezan-kevitra mialoha ny fotoana Mitaky lalàna fanasaziana ny KMF/CNOE
Lalàm-pifidianana vaovao no hifehy ny fifidianana hitranga eto Madagasikara manomboka amin’ny taona 2018.
Jamban’ny fahefana !
Ao ve ianareo ry Jean a! Tena may ara-bakiteny mihitsy ny tanàna izany a ! Saingy toa tsy mba taitra ho’aho ianareo ry Jean sa efa vitanareo faminaniana mialoha io sera io ?
Andranomadio Antsirabe Tovolahy nahatrarana vola sandoka
Miparitaka eran’i Madagasikara ny vola vaovao sandoka. Mila ho isan’andro no ahenoana tranga vaovao.
Tazony amin’ny vavako aho !
Tena manahirana ny sofina mihaino sy ny maso mijery ny mbola mandre foana hatramin’izao hoe :
TARIKA AMBONDRONA Etsy Andavamamba no fotoana
Hifampitaona amin’ny mpankafy azy etsy amin’ny AFT Andavamamba indray amin’ny alahady 3 septambra ho avy izao ny tarika Ambondrona ao anatin’ny fankalazana ny faha-70 taona niorenan’ny Alliance Française.
Lozam-pifamoivoizana Fianakaviana handevina saika niara-maty
Nitrangana lozam-pifamoivoizana indray ny lalam-pirenena faha-7 niala an’i Vinaninkarena ny tolakandron’ny alarobia tokony ho tamin’ny 1 ora sy sasany.
LA GRANDE BRADERIE DE MADAGASCAR Hentitra ny fanaraha-maso ny vidin’entana
Hentitra ny fanaraha-maso ny vidin’entana etsy amin’ny lapan’ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina.
Paul Rabary Mamitaka ny fahaizan’ny ankizy amin’izao
Mila avahana ny taham-pahafahana sy ny fari-pahaizan’ny ankizy, hoy ny minisitry ny fanabeazam-pirenena,
Fikambanana Iray Madagasikara Hampihavana amin’ny alalan’ny kolontsaina
Nampahafantarina omaly tetsy amin’ny ivontoerana ara-kolontsaina (IKM)
Fanjakana sy ny Rotary Hiara-kiasa amina sehatra maro
Mitsidika an’i Madagasikara i Manoj Vaghjee, Governoran’ny Distrika Rotary 9220 Oseana Indianina, ho an’ny taom-piasana 2017 – 2018.
KAOMININA AMBOHIMANGAKELY Ireo razana misy manary eny amin’ny By-pass no maharatsy laza azy
Voaresaka hatrany ny Kaominina Ambohimangakely rehefa misy tranga hafahafa miseho any amin’iny lalam-pirenena faharoa iny.
Zandary sandoka Noraisim-potsiny izy 4
Mpisoloky niisa 4 be izao no saron’ny polisim-pirenena tao Antsirabe ny herinadro lasa teo ary natolotra ny fampanoavana ny alatsinainy lasa teo.
Nanao fanehoan-kevitra omaly ny teo anivon’ny antoko Hery vaovao ho an’i Madagasikara (HVM) ao amin’ny faritr’i Vatovavy Fitovinany nanoloana ny nanendrena ho minisitry ny fitaterana ny zanaky ny faritra, Ralava Beboarimisa.